"Kholmogory" ụdị nke ehi na: àgwà, ọdịdị, ọrịa na foto - Ugbo - 2019
N'okwu ahụ bụ "ehi", ọtụtụ n'ime anyị na-ewere ya na ọmarịcha mara mma na-acha ọcha na nke ọcha na nnukwu udịrị.
Nke a bụ otú ugwu ugwu - ndị nnọchiteanya nke ìgwè, otu n'ime atọ kachasị ama na Russia, yiri.
Agụmakwụkwọ Kholmogory mara mma emeziri ka oyi na-atụ, na ha mmiri ara ehi nwere nnukwu abụba na nnukwu uto.
"Kholmogorskaya" ụdị ehi: àgwà na foto
Banyere ịzụlite na mmezi
A na-enwe ụdị anụ ụlọ na XVII narị afọ na Arkhangelsk mpaghara. Aha a sitere na nchịkọta Kholmogory. N'okpuru Peter M, Arkhangelsk ghọrọ ọdụ ụgbọ mmiri kachasị elu, ebe etiti ahia na ọtụtụ mba Europe.
Ọnọdụ ihu igwe dị mma maka ịzụlite ehi ehi.. N'elu mmiri mmiri nke Northern Dvina, e nwere ọtụtụ ebe a na-ata nri na-ejupụta na ahịhịa na-edozi ahụ.
Achọ maka ngwaahịa maka mmiri ara ehi na-ekerekwa òkè dị ukwuu: mmiri ara ehi na oyi na-atụ na ngwaahịa ndị ọzọ na-arụ ọrụ na-esi na Arkhangelsk na-ebugharị site n'oké osimiri.
N'agbanyeghị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị afọ abụọ, a kpọbatara ehi na oke ehi ndị ọzọ na Arkhangelsk, ọ gaghị ekwe omume ikwupụta banyere mmetụta dị ịrịba ama ha n'ugwu nta.
Na oge Soviet, ndị ọkà mmụta sayensị mere nyocha banyere ịzụlite, n'oge a na-agafe ehi ndị Kholmogory na ndị nnọchianya nke ndị dị na Holstein na Dutch.
Ebumnuche nke ịgafe bụ ime ka mmiri ara ehi na-abawanye. Ma, o wee pụta na ụmụ nke abụọ dị iche iche, ọ bụ ezie na ha nyere ọtụtụ mmiri ara ehi, ọ dị iche iche na-ebelata abụba.
N'otu oge ahụ, uto na ihe ngosi ndị ọzọ na-aka njọ. Na nke a, ọrụ na nhọrọ a kwụsịrị.
Ụkọ akụrụngwa dịka onye nwere onwe ya ruo ọtụtụ narị afọ, ma ọ bụ edere ya na 1937.
Ụmụ anụmanụ ndị a dị oke, ogologo ogologo ma na-atụgharịkwa. Elu na-akpọnwụ na ndị okenye - ruo 130-140 cm. Ụcha na-acha ọcha ma na-acha ọcha, na-acha ọcha. Enwere ụmụ anụmanụ kpamkpam, ọ dịkarịghị - acha uhie uhie na agba ọcha.
Ụdị nke isi bụ elongated, olu dị obere. Ụkpụrụ ahụ dị ike, a na-edozi aka ahụ n'ụzọ ziri ezi, akara nke azụ azụ na úkwù bụ njirimara. Ọdịdị dị elu na sacrum dị iche na nke dị elu na-akpọnwụ site 5-7 cm.
Udder nwere ọdịdị gbara gburugburu na ọkara nha. E nwekwara ehi na udiri iko na, obere, ewu ewu. Mgbe ụfọdụ, o nwere udiri nke atọ nke nipples. Ụdị nke ọkpụkpụ ahụ bụ cylindrical, elongated.
Ụmụ ehi na-eto eto na-eru kilogram 550. Banyere ndị okenye tozuru etozu, ibu ha nwere ike ibu ibu: ruo n'arọ 800-850. E nwere ihe atụ mgbe oke agbụrụ nke ìgwè a tụrụ otu ton.
A na-amụ ehi na-ebu ihe kariri kilogram 30.. Gobies, dị ka a na-achị, ugbua na-amụ nwa dị ntakịrị karịa chicks. Mgbe ọ dị ọnwa isii, ọ bụrụ na a na-elezi ụmụ ehi ahụ anya, ha ga-atụle ya: oké ehi dị - 180 kilogram, ụmụ ehi - 150-170 n'arọ. Site na ọnwa 18, ụmụ ehi ruru ihe dị ka 370-390 kg.
Otu okenye okenye na-enye ihe dị ka 3200-3800 kilogram nke mmiri ara ehi kwa afọ, na ọnọdụ dị mma nke mmiri ara ehi nwere ike ịbawanye ruo puku kilogram isii. Mmiri ara ehi na-abụkarị ihe karịrị 3%, ruo 3.87%.
E nwekwara ụdị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ nke mmiri ara ehi ya dị elu, dịka: Jersey, Simmental, Ayshir, Red Steppe.
Foto "Kholmogorsky" umu ehi:
Na mmalite afọ 2000, otu nnukwu ìgwè ehi, nke e mere n'ime ugbo Tolstopaltsevo (mpaghara Moscow), mara amara n'etiti ndị ọkachamara.
Ha jisiri ike nweta mkpụrụ mmiri ara ehi nke 6484 kg nke mmiri ara ehi (abụba abụba 3,9%, protein 3.31%). N'etiti ụzọ ndị ọzọ, a na-eji nkà na ụzụ eme ihe nke ụyọkọ mmiri abụọ, n'ụzọ dị iche na nke oge gboo - oge atọ na-arụ ọrụ.
Ka ọ dị ugbu a, a na-emepụta àgwà ndị dị otú ahụ dị ka ọdịdị nke ogwu na ọnụego nke lactation. Ndị ọkà mmụta sayensị na ndị na-azụ ụmụ na-arụ ọrụ iji meziwanye anụ nke ehi, na-achọ na ịchọta ụzọ iji mụbaa mmiri ara ehi na mmiri ara ehi. Ọrụ a bụ iji nweta abụba abụba 4% ma merie nnukwu ihe a.
Na mkpokọta, e nwere atọ subtypes nke Kholmogory ìgwè: Pechora, Northern na Central, àgwà nke Komi Republic, Arkhangelsk na Moscow, mpaghara.
Iwu maka nlekọta na ilekọta ugwu adịghị iche na ndụmọdụ ndị a chọrọ. Ebe nchekwa dị ọcha, akọrọ na nke sara mbara, nri kwesịrị ekwesị dị mkpa maka ezi ahụ ike nke ụmụ anụmanụ ma na-enweta mmiri ara ehi zuru ezu.
Ebe ọ bụ na ụdị Kholmogory na-ahụkarị n'ọtụtụ mpaghara Russia na mba ndị gbara ya gburugburu, nri dịgasị iche dịka ọnọdụ mpaghara.
Hilltop nwee ahụike dị mma na nnukwu nsogbu. N'ịbụ ndị na-agbagwoju anya na n'ụzọ zuru oke maka ihu igwe nke dị n'ebe ugwu, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha anaghị adị mfe oyi.
Achọpụtaghị ya: ụkwara nta, rheumatism, ọrịa ọrịa.
Ọrịa ọrịa leukemia ukwu. N'ihi mgbalị nke ndị na-azụ atụrụ, a na-echekwa atụmatụ a mgbe nile na ụmụ anụmanụ na - atagharị - ụmụ ugwu ugwu na Holstein.
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, e duziri ọmụmụ ihe ndị a mụrụ:
enwere ike iji ihe owuwu ọhụrụ maka ụlọ anụ ụlọ;
nhọrọ maka usoro ụbọchị, mmetụta ya na mmiri ara ehi;
nri dị iche iche;
ụzọ iji belata ọnụ ahịa nke mmiri ara ehi.
Akwadoro maka iji ihe owuwu ọhụrụ ("Polyterm" na ndị ọzọ), na-adịgide adịgide na gburugburu ebe obibi.
Gosiri na ụmụ anụmanụ na-akwado abụọ milking. Mgbanwe nke usoro ihe a na-eme ka ọnụọgụ mmiri na-abawanye ụba ma na-enyere aka belata ọnụahịa nke mmepụta.
Enwere ike ikpochapụ ihe oriri nke ọka na ọtụtụ akwụkwọ nri mgbọrọgwụsite na iji dochie nri ndị a na-eji nri ọka na-edozi ahụ. Ụzọ a na-enye aka belata ume na ọrụ ego maka ịmepụta nri n'emeghị ka àgwà na mmiri ara ehi dị ukwuu. Mkpebi nko
Anumanu nke umu Kholmogory nwere uru di egwu. Ụmụ anụmanụ ndị a enweghị nchekasị, na-anabata ọnọdụ ihu igwe dị mma, nke ọma acclimatized na mpaghara ndị ọzọ.
Mmiri ara ehi na ihe eji eme ya nwere uto magburu onwe ya.
Akwukwo Igbo a bu ebe nile na Russia. A pụkwara ịchọta ha n'ime ugbo Ukraine, Moldova na mba ndị ọzọ.
Holmogorks bụ ụmụ ehi mara mma, ha na-ewetara ndị na-etolite ha na ndị na-ahụ ụtọ mmiri ara ehi na mmiri ara ehi dị ụtọ.
Nri edere: usoro nri nri na ntụziaka
Ngwongwu "Azofos": otu esi mụọ ma tinye
Isi nke isi ibu stimulants maka tomato na ose seedlings: esi eto seedlings ike seedlings
Anyị na-eme ka ọnụ ụzọ ámá nke ihe edozi: ụdị, nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka
Na-acha ọcha Acacia, ma ọ bụ otú e si esi okooko osisi na-esi ísì ụtọ na dacha
Ọ dị mkpa maka ndụ ndụ orchid - esi esi mmiri Phalaenopsis?
Dracaena marginata: nlekọta ụlọ
Ike na adịghị ike nke apple apple Lada
Kedu ihe tọrọ ụtọ ịme nri nke kọlịflawa na oyibo na broccoli? Nri nri
Ihe mere geese ji tweak onye ọ bụla ọzọ
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ndị Kholmogorks (nke bụ "Kholmogorskaya" nke ụmụ ehi) na-ewetara ndị na-eto ha na ndị na-ahụ mmiri ara ehi ọṅụ!